Jen. Birhaanuu Julaa: Raayyaan Ittisa biyyaa ummata tiksa malee hin dararu - BBC News Afaan Oromoo
Raayyaan Ittisa Biyyaa nageenyummaa uummataa mirkaneessuuf hojjeta malee uumata nagaa badiisaa malee dararaa ture kan jedhu oduu dharaati jedhu Ajajaa Ittaanaa Walii Galaa Humna Waraanaa Itoophiyaa Janaraal Birhaanuu Julaa.
Lammiilee Itoophiyaaf wabii dhaabbatee, biyyaaf nageenya waaraa mirkaneessuuf, akkasumas heera mootumma kabachiisuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan hundaa'e Raayyaan Ittisa Biyyaa lammiilee nagaa dararuudhaan yeroo baayyee komiin irratti ka'a.
Tibbanas Godina Booranaa Aanaa Miyoo magaalaa Hiddii Lolaatti misirroo wal fuudhanii cidhaa galaa jiran dabalatee namoonni shan rasaasaan ajjeefamuu fi lama ammoo madaa'uu jiraattonni BBC'tti himanii turan.
Namootni shanan kan ajjeefaman rasaasa rayyaan ittisa biyyaa dhukaaseeni jedhu jiraattonni dubbifne.
Bulchaan Aanaa Miyoo Obbo Badhaanee Liiban, ajjechaan kun raawwatamu isaa fi kan ajjeeses Raayyaa Ittisa Biyyaa hojii nageenyaaf achi jiru ta'uu BBC'tti himaniiru.
Kun utuu kanaan jiruu raayyaan ittisa biyyaa ayyaanasaa kabajachuuf magaalaa Adaamaatti walga'eera.
Guyyaa kana sababeeffachuun marii magaalaa Adaamaatti geggeeffamerratti kana argaman Ajajaa Ittaanaa Walii Galaa Humna Waraanaa Itoophiyaa Janaraal Birhaanuu Julaa, Raayyaan Ittisa Biyyaa jijjiirameera wayita jedhamu, wanti qabatamaan jijjiirame maali jechuun BBC'n gaaffii dhiyeessefiira.
''Waanti qabatamaan amma dhufe, ijaarsi jijjiirameera. Raayyaa ittisaa keessatti hoogganaan gubbaadhaa hanga godaatti akkaataa sabaa fi sablammoota uummata Itoophiyaa fakkaatuun ijaarameera,'' jedhan.
Kanaan alatti kan jijjiirame ilaalcha kan jedhan Janaraal Birhaanuu Julaa, waraanni Itoophiyaa kun loltuu saba tokkoo fi naannoo tokkoo osoo hin tanee loltuu biyyaa ta'uu akka qabu jijjiiramni amma dhufe ni ajaja jedhan.
Gama kanaan immoo ilaalchi loltuu akka sirraatu, dogoggorri tokko tokko kanaan dura ture akka bakkatti deebi'u, seera ittiin bulmaata biyyattii qofaan akka hojjetu giddu galeessi isaa uummata akka ta'e, hojiiwwan kana fafakkaatan hojjetamaa jiru.
Ajjeechaawwan bakkeewwan adda addaatti raawwatamaniif maqaan raayyaa ittisa biyyaa ni ka'a. Fakkeenyaaf dheengadda Godina Booranaa Aanaa Mi'ootti isa raayyaan Ittisa Biyyaa namoota shan ajjeese jedhmu namootarraas hooggantoota naannoorraas adda baasneerra.
Jijjiiramni dhufaa jira utuma jedhamuu komiin kun ka'uun maaliif barbaachise? Isa kanarrattillee maal jettu jennee gaafanneerra.
''Ani biiroo waan hin turreef odeeffannoo jedhame dabalatee kan gidduu kanaa quba hin qabu. Raayyaan Ittisa Biyyaa dur bakka tokko tokkotti dogoggora uumaa tureera. Ilaalchi yeroo sana waraana Itoophiyaarratti ture ammas hojjetaa jira.
''Raayyaan Ittisa Biyyaa garuu dogoggora yeroo sanaa sirreessaa jira. Amma warreen nagaa booressan, olaantummaa seeraa cabsan, isaan kanneenirratti tarkaanfii fudhachuun seeera qabeessa waan ta'eef deebii biraa hin qabnu nuti. Raayyaan Ittisa Biyyaa uumatarraan rakkoo qaqqabsiiseera yoo ta'e innis itti gaafatama,'' jedhan.
''Raayyaa Ittisa Biyyaatu kana raawwate yoo jedhamu miidiyaanillee isuma kana fuudhanii qilleensarra baasa. Sirriitti qoratee hin dhiyeessu. Qulqulleessee bakka dhugaan jirtu adda baasee qilleensarraan ba'aa hin jiru miidiyaan. Kan nu rakkise kanadha.
''Akka amma umamee jedhameef, raayyaan gadi ba'ee uummata nagaa karaasaa deemu, kan kaayyoo gara biraa hin qabnerratti tarkaanfii fudhata jedhee gonkumaa amanuu hin danda'u. Yoo tarkaanfii fudhatee jiraatellee waatu jira jechuudha bakka sana,'' jedhan.
Loltoonni Gaabonitti yaalii fonqolchaa taasisan lama 'ajjeefaman '
Dogoggora Raayyaan Ittisa Biyyaa raawwataa turerratti komii uumataa ka'aa tureef deebiin kenname maali, erga aangootti dhuftanii badii yookiin dogoggora waraanni Itoophiyaa raawwateef tarkaanfiin seeraa fudhatameeraa? kan jedhurrattis yaada BBC'f kennaniiru.
''Dogoggora uumame hin beeknu. Hin agarrees. Raayyaan ittisa biyyaa uummata nagaa ajjeeseera kan jedhu sadarkaa mootummaa federaalaattillee, sadarkaa naannoottillee, sadarkaa keenyattillee kan beekamu hin jiru.
''Ani as taa'ee uummanni Oromoo namni tokkoyyuu badiisaa malee akka rukutamu akka ajjeefamu, hin barbaadu. Warri ana jala jirummoo hordooffii kootiin hojjeta. Namni kamuu yoo balleesse seeraan ni gaafadha. Kanaaf hololadha malee, raayyaan ittisa biyyaa uummata eegee, ummata tiksee, uumata karaa dabarseeti kan hojjetaa jiru,'' jedhaniiru.